vendredi, 26 mars 2021 20:46
Antenimieram-pirenena : Natao fitiliana ireo depiote sy ny mpiasa
Natao fitiliana faobe ny mpiasan'ny Antenimieram-pirenena sy ireo Solombavam-bahoaka androany 26 martsa 2021 teny amin'ny CCI Ivato nialoha ny famaranana ny fotoam-pivoriana. (Jereo Sary Tohiny)
vendredi, 26 mars 2021 14:55
Oniversité Katolika : Tsy mianatra manombaka ny 27 martsa - 11 aprily 2021
Noho ny fihombon'ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara, indrindra ny eto Antananarivo, dia nanapa-kevitra ny Oniversité Katolika, fa tsy azo atao ny mivory mihoatra ny 200, izay soutenance efa voafaritra mialoha, dia ferana ambanin'ny olona 200 ihany no manatrika azy. Foanana ihany koa ny lamesa fankalazana ny Paka efa voafaritra atao ny sabotsy 27 martsa 2021. Fialan-tsasatra ny 27 martsa ka hatramin'ny 11 aprily 2021. Miverina mianatra ny 12 aprily. Ireo mpianatra rehetra L3 dia tsy manao stage any amin'ny orinasa ivelan'ny sekoly fa mandrafitra ny tetikasa fihariana. Amafisina ny fanaovana ireo fihetsika fiarovana, toy ny arovava orona, fakana hafanana alohan'ny hidirana ny sekoly, ny fanasana tanana, sy ny fanajana ny elanelana, ny ranom-panafody hitsahina amin'ny kiraro. Fendrahana fanafody famonona aretina ny toeram-pianarana rehetra mandritra ny fikatonan'ny sekoly.
Fanofanana mpitsabo : Miato ny fampianarana sy ny fanadinana
Miato avokoa ny fampianarana, ny fanadinana, ny thèses sy mémoires ao amin'ny sampana fanofanana mpitsabo, manomboka ny talata 30 martsa ka hatramin'ny alatsinainy 12 aprily 2021. Misy ny "service minimum" isan'andro manomboka amin'ny 8ora maraina ka hatramin'ny 11ora atoandro. Raha ny fanazavana voaray dia noho ny hamehana ara-pahasalamana sy ny fandraràna ny fivorian'ny olona mihoatra ny 200, ka tsy ampy ho zaraina ny efitra, ary dia mijanona ihany koa ny fanadidinana PACES izay tokony hatao amin'ny herinandro ambony io.
vendredi, 26 mars 2021 13:53
ENS : Hiato hatramin’ny 12 aprily ny fampianarana
Hiato ny fampianarana rehetra ao amin'ny Ecole Normale Supérieure manomboka ny 30 martsa ka hatramin’ny 12 aprily 2021, noho ny hamehana ara-pahasalamana. Misy kosa ny “service minimum” ho an'ny fandraharahana.Hiverina ny fampianarana manomboka amin’ny 13 aprily 2021.
vendredi, 26 mars 2021 13:52
DEGS Oniversite Antananarivo : Hiato hatramin’ny 11 aprily ny fampianarana
Nanapa-kevitra ny Filankevitra siantifika eo anivon’ny Oniversiten’Antananarivo fa hiato ny fampianarana rehetra ao amin'ny DEGS manomboka ny 30 martsa ka hatramin’ny 11 aprily 2021. Misy kosa ny “service minimum” ny tapak’andro maraina.Hiverina ny fampinarana manomboka amin’ny 12 aprily.
vendredi, 26 mars 2021 11:07
Ankatso : Mitsahatra ny fampianarana eo anivon'ny F.L.S.H noho ny Covid-19
Noho ny antony hamehana ara-pahasalamana dia miato ny fampianarana eo anivon'ny Faculté des Lettres et Sciences Humaines eto Antananarivo mandritra ny 15 andro, manomboka ny Alatsinainy 29 martsa 2021 ka hatramin'ny Alahady 11 aprily 2021. Misy ny "Service minimum" ho an'ny fandraharahana.
vendredi, 26 mars 2021 11:06
Vontovorona : Hiato ny fampianarana mandritra ny 2 herinandro noho ny Covid-19
Amin'ny fisian'ny valanaretina Covid-19 miely eto amin'ny Polytechnique dia nanapakevitra ny CSU fa : 1- hampiato ny asa fampianarana rehetra (cours, soutenance, ...) mandritra ny 2 herinandro manomboka ny 29 marsa 2021 ;2- Manao service minimum ny administration. Efa voazara omaly avokoa ny vatsim-pianarana, noraisina lelavola, 4 volana sy fampitaovana, ankoatr'ireo izay mbola tsy vita digitalisation. Nilamina tsara ny fizarana. Nanao tsipaipaika ireo mpianatra ho fanonerana ilay latabatra hazo fivarotan'ireo mpivarotra simba, ary manana vina izy ireo ny hanamboatra tsena mihitsy ho fitaratra tsara amin'ilay fiarahamonina, fa eo ampikarakarana sy fitadiavana vola sy izay afaka manampy ara-materialy toy ny ciment sy vy.
vendredi, 26 mars 2021 09:58
Moramanga : Miomana amin'ny fahatsiarovana ny Tolom-panafahana 1947
Voairaka hanao "tip top" ny route de la gare mankeo amin'ny Tsangambaton'ny 29 martsa 1947 Moramanga ny Sinoa mpanao lalana RN44 anio. Efa somary potika be ihany io ampahan-dalana io ao.
jeudi, 25 mars 2021 17:26
Sary : Fiarovam-pirenena
Ministeran'ny Fiarovam-pirenena : Nomena CVO + ireo miaramila sy ny mpiasa sivily
Notanterahin'ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena androany, niaraka tamin’ny Lehiben'ny Etamazaoron'ny Tafika, ny fizarana ny CVO Plus ho an'ny miaramila sy ny mpiasa sivily ao amin'ny Ministeran'ny Fiarovam-pirenena. Teny amin'ny Toby Rakotonirainy Alphonse no nanomezana ny anjaran'ireo miaramila misehatra eo anivon'ny ZDS miisa 10 manerana ny nosy. Teny amin'ny Toby Rezimanta Voalohany Jenia Miaramila, kosa ho an'ny miaramila miasa eo anivon'ny Ministera sy ireo amin'ny toby manodidina. Tanjona ny hanana miaramila salama afaka manampy ny vahoaka amin’ny ady amin'ny valanaretina Covid-19. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 25 mars 2021 17:10
Covid-19 : Feno ary efa tsy maharaka ny hopitaly eto Toamasina
Tsy mitsahatra mitombo ireo marary miditra hopitaly eto Toamasina, efa tsy maharaka intsony ny toerana andraisana azy ireo.
Page 7 sur 636